UNC ၏ရည်ရွယ်သည့်ရက်ပ်နှင့်သွားဆရာဝန် BAZANJI နှင့်တွေ့ဆုံပါ - နှုန်းထားများ
Bazanji, UNC ရဲ့မျှော်လင့်ရက်ပ်နှင့်သွားဆရာဝန်နှင့်တွေ့ဆုံရန်
UNC Rapper Shad Albarazanji Bazanji ဂီတကမ္ဘာမှာ ၁၀၀၀ ရှိတယ် YouTube တွင်ဖွင့်သည် မိမိအပထမနှစ်။ ယခုသူ၌ ၁.၁ သန်းရှိသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကသူဟာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ် Cam Meekins နှင့်အတူသီချင်း , The Taz Show ကို Podcast တခုကိုများအတွက်နိဒါန်းနှင့် Little က Frat တရားရုံးအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီရဲ့ LDOC ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ဘဝ Kickoff ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ဒီနှစ် Relay အပါအဝင် Chapel Hill နှင့်နယူးယောက်ရှိနေရာများမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိအချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာရက်ပ်ပါနှင့်အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားက UN သို့လာရောက်သင်ကြားသည့်ရက်ပ်နှင့်သွားဆရာ ၀ န်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်တူသည်ကို The Tab သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်မင်းနာမည်အပြည့်အစုံ Shad Albara …
Albarazanji ။ ကျွန်တော့်နာမည်က Bazanji ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးနာမည်ကပြဇာတ်တစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်နာမည်ကအရမ်းရှည်နေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုအသံထွက်ရမှန်းမသိကြဘူး။ အထက်တန်းကျောင်းမှာလူတွေဟာငါ့ကိုဘဇန်ဂျီ (ခေါ်) ဒါမှမဟုတ်ငါ့နာမည်ကိုမတူကွဲပြားစွာပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂူးဂဲလ်သို့မဟုတ်ယူကျုးဘ်တွင်၎င်းကိုရှာဖွေပါကကျွန်ုပ်၏ဂီတသည်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာမည့်အရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်င်!
သင်ဘယ်လို rapping စတင်ခဲ့တာလဲ
ပထမ ဦး ဆုံးမိုက်ခရိုဖုန်းဝယ်ပြီးခါစပထမနှစ်ပထမနှစ်ကောလိပ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ငါကျပန်းအရာများမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာ Granville မှာနေထိုင်ခဲ့ကြောင့်အဲဒါကိုထုတ်ထားရန်လုံလောက်သောကောင်းသည်ထင်တဲ့အချက်ရတယ်။ ယခုငါပြန်ကြည့် ... ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်၏အဟောင်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာ ... ငါဘာထင်ခဲ့တူသောဒါဟာ? သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သမျှသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားငါဂျေကိုးလ်ပြောချင်ပါတယ်။ သူသည်မြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှလာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သူ့ကိုအများကြီးနားထောင်သည်၊ တခါတရံငါကဲ့သို့သောတူဂီတကိုမလုပ်နိုင်သောကြောင့် ... သူတို့ရဲ့အသံကဘာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ကိုယ့်ငါ့ကိုဆင်တူဂီတအောင်နေသောသူတွေကိုနားထောင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ... Rick Ross က။ ဂီတလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာမင်းရဲ့နယ်ပယ်ကိုရှာရမယ်။
မင်းရဲ့သီချင်းစာသားထဲမှာ UNC အကြောင်းတစ်ခုခုပြောခဲ့ဖူးလား။
မင်းငါ့ကိုသိလို့ ... ငါတီးခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်သီချင်းကို The the the Hill in the the Hill in the 5th Ave on the Party, Mac Miller သီချင်းလား။ သူကထွက်လာသောအခါသူက retweeted မဟုတ်ပါဘူး, ငါငါကျောင်းဝင်းအပေါ်အအေးဆုံးဆိဖြစ်ခဲ့သည်ထင်။ ငါ၌ဤသူအပေါင်းတို့သည် Chapel Hill ကိုးကားခဲ့ Country Night, BSki နှင့်သူမရဲ့တူသောရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနွေ ဦး Shwayze အတွက်ဖွင့်လှစ် Little က Frat တရားရုံး၌တည်၏။ အရူးမီးပြပွဲများနှင့်မြူစက်များနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယရှိခဲ့သည်။ ငါဟာတော်တော်လေးရှည်လျားတဲ့ set တစ်ခုရှိခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာသီချင်းတွေအများကြီးကစားနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကမင်းလိုမျိုးတစ်ယောက်ယောက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါထူးခြားနေတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများအားလုံးစင်ပေါ်မှာတက်နေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအချိန်ကောင်းကောင်းရနေကြသည်။
များသောအားဖြင့်လူတွေကိုသင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ Green Room မှာပြပြီးတဲ့နောက် Shwayze နဲ့သူနဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူကတော်တော်လေးအေးဆေးပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကမိန်းကလေးတချို့နဲ့အတူရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကနည်းနည်းအေးတာပဲ။ ပြီးတော့သူကအလုပ်များနေတယ်။
သီချင်းများ၊ စာသားများ / သင့်အလုပ်ကိုတစ်နေ့လျှင်နာရီမည်မျှအသုံးပြုမည်နည်း။
တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၁၀ နာရီခန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံး သငျသညျကိုတကယ်ဖန်တီးမှုရသည့်အချိန်များရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်ငါစာသားထပ်ခါတလဲလဲအပေါ်ဂီတ 12 နာရီ, ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာမှာအစာစားတောင်ပါလိမ့်မယ်။
မင်းရဲ့ရက်ပ်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်သင်ကျောင်းထွက်ဖူးပါသလား။
ငါပြုခံရခံရဖို့သိပ်နီးကပ်မိပါတယ်ကတည်းကအထူးသဖြင့်ကတည်းကငါအဘို့ကျောင်းမှဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်။ ငါကအမြဲတမ်းသွားဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကရပ်ကွက်မှာအမှုဆောင်တာ၊ ပြန်ပေးတာကိုသဘောကျတာပဲ။ အဲဒါတွေကိုဖော်ပြဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ပဲလို့ငါခံစားရတယ်။ ဒါဟာအတူတူထားအနုပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပါပဲ။
သငျသညျကပ်နှင့်တ ဦး တည်း switch ကိုတောက်လျှင်, ဘာမှမဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ သင်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာဘာမျှမဖြစ်ပျက်နေလျှင်ပင်နောက်တစ်နေ့သို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့တွင်အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်မည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှသင်မသိပါ။ ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်တာကဂီတကိုဆက်ပြီးဖြန့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ အစပိုင်းမှာတော့တေးဂီတကိုငွေမသုံးဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအလဟ be ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်လို့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဂီတအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ငွေများများထည့်ခြင်းသည်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။ ငါကclichéမျိုးဖြစ်ကြောင်းသိပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်မရင်းနှီးမြှုပ်နှံဘူးဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုမှသင့်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမဟုတ်ဘူး။
Bazanji ရဲ့ဖမ်း လာမယ့်စွမ်းဆောင်ရည် စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 10 ရက်နေ့ကအဆိုပါစာကြည့်တိုက်မှာ။